kungani ungafuna ukwenza ukuhlolwa okuzenzakalelayo?
none Ezishintshayo Kungani Ungafuna Ukwenza Ukuhlolwa Ngokuzenzakalelayo?
Kungani Ungafuna Ukwenza Ukuhlolwa Ngokuzenzakalelayo?
Kungani ungenza isivivinyo sishintshe? Iziphi izinzuzo esizitholayo ngokuhlolwa okuzenzakalelayo?
Imvamisa lapho abantu bebandakanyeka ekuhlolweni okuzenzakalelayo, ukugxila kwabo okuyinhloko kuguqula ukuklama izivivinyo ezinhle kuya ekuqinisekiseni ukuthi ikhodi ezenzakalelayo ingakwazi ukwenza nokuqhuba isivivinyo.
Ngesikhathi se-sprint lapho amalungu eqembu engaphansi kwengcindezi yokuletha izindaba ngesikhathi esilinganiselwe, imvamisa asikho isikhathi esanele sokuhlola zonke izimo ezihleliwe, ingasaphathwa eyokubhala imibhalo yokuhlola ezenzakalelayo ukuhlola ukusebenza okusha.
Singacindezelwa ngemininingwane yomsebenzi, ukufaka amakhodi, ukubuyekeza, ukwenza nokukhohlwa ngesizathu esikhulu ngani empeleni sisebenzisa isivivinyo ngokuzenzakalela!
Kungani senza isivivinyo sizenzekelayo?
Lona ngomunye wemibuzo engiyibuzayo lapho ngixoxisana nabangenele iqhaza leTest Automation futhi kwangimangaza ukuthi abaningi abazobhapathizwa babonakala bephuthelwa yisizathu esikhulu nesibaluleke kakhulu sokwenza isivivinyo ngokuzenzakalela. Ezinye izimpendulo engizithola kubaqokelwe zithembekile impela, kepha nokho akuyona impendulo engiyifunayo. Ezinye izimpendulo engizithola kulo mbuzo ongenhla yilezi:
Khulisa Ukuhlolwa Kokuhlola
Le mpendulo isebenza kahle, kepha sikuchaza kanjani ukumbozwa? Uma sinezivivinyo eziyi-100, singalinganisa kanjani ukumbozwa kwamaphesenti?
Ngomkhuba wokuvivinya ovuthiwe osebenzayo, ungahle usebenzise izivivinyo eziningi esikhathini esifushane.
Ngenxa yalokhu, singakha amacala amaningi wokuhlola, izimo zokuhlola eziningi futhi sihlole ngemininingwane yokufaka yesici esinikeziwe futhi ngaleyo ndlela sithole ukuzethemba okukhulu kokuthi uhlelo lusebenza njengoba kulindelwe.
Kodwa-ke, ekuhlolweni futhi ikakhulukazi ekuhloleni okuzenzakalelayo, izivivinyo eziningi azisho ngempela ikhwalithi engcono noma amathuba amaningi okuthola izimbungulu.
Eposini likaMartin Fowler, lapho ahlala khona Ukuhlolwa Kokuhlola , uyasho
Uma wenza ileveli ethile yokumboza ithagethi, abantu bazozama ukuyifinyelela. Inkinga ukuthi izinombolo zokumboza eziphakeme kulula kakhulu ukuzifinyelela ngokuhlolwa kwekhwalithi ephansi. Ezingeni elingenangqondo kakhulu onalo I-AssertionFreeTesting . Kepha ngaphandle kwalapho uthola izivivinyo eziningi ufuna izinto ezingavamisile ukuthi zingahambi kahle zikuphazamise ekuhloleni izinto ezibaluleke ngempela.
Le mpendulo nayo iyiqiniso njengoba ungachitha isikhathi esibalulekile wenza ukuhlola okuthakazelisayo kokuhlola ngenkathi izivivinyo ezizenzakalelayo zisebenza. Kodwa-ke, ngesici esisha sha esakhiwe, empeleni kungathatha isikhathi eside ukubhala imibhalo ezenzakalelayo kunokuhlola leso sici ngesandla ngokushesha.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ukonga isikhathi kusuka ekuhlolweni okuzenzakalelayo, kudinga umzamo wokuqala owandisiwe ekubhaleni izivivinyo ezizenzakalelayo, uqiniseke ukuthi ziyabuyekezwa ikhodi, nokuthi azikho izingqinamba ekwenzeni ukuhlolwa okuzenzakalelayo.
Thola ama-Bugs amaningi
Le mpendulo iyangikhathaza kwesinye isikhathi njengoba angikaze ngibone amamethrikhi akhombisa ukuthi kunezimbungulu eziningi ezitholwe yi-automation kunokuhlolwa okwenziwa ngesandla / ukuhlola. Ukuhlolwa okuzenzakalelayo ngokuvamile kubheka noma yikuphi ukubuyela emuva ohlelweni ngemuva kokuthi ikhodi entsha isetshenzisiwe.
Kuhlala kunamathuba amaningi okuthola izimbungulu kuzici ezintsha kunokusebenza okukhona. Ngaphezu kwalokho, kunezinye izizathu kungani ukuhlolwa okuzenzakalelayo kwehluleka ukuthola ukukhubazeka
Shintsha Abahloli Bemiqulu
Le mhlawumbe iyona mpendulo ebi kakhulu engiyizwile maqondana nokuthi kungani senza isivivinyo sizenzekelayo. Kukhona umehluko ocacile phakathi kwalokho okwenziwa umhloli wezandla nokuthi yini ukuhlolwa okuzenzakalelayo okuhlola. Ukuhlolwa okuzenzakalelayo akuvivinywa, kubhekwa amaqiniso.
Ukuze sikwazi ukwenza isivivinyo ngokuzenzakalela, kufanele sazi umphumela olindelekile ukuze sikwazi ukubheka umphumela ovumelekile noma ongavumelekile. Lokhu yilokho okusinikeza iqiniso noma amanga, okuhle noma okungalungile, ukudlula noma ukwehluleka.
Ukuhlola ngakolunye uhlangothi kungumsebenzi wophenyo, lapho sakha futhi senze izivivinyo ngasikhathi sinye. Izinto eziningi zingaziphatha ngokuhlukile lapho kuphela umhloli womuntu oqaphelayo ongabona.
Abahloli bezandla abahle bazodingeka njalo ngenxa yengqondo ehlukile kanye namandla okubuza uhlelo.
Yize izivivinyo ezizenzakalelayo zikwazi ukusinika impendulo esheshayo futhi zisiqwashise ngempilo yohlelo lokusebenza, ukuze sikwazi ukubuyisa noma yiluphi ushintsho lwekhodi olwephule uhlelo, ukuhlolwa okuzenzakalelayo kukodwa akuluthuthukisi ikhwalithi. Ukuthi sinemishini yokuhlola evuthiwe ekhona akuqinisekisi ukuthi azikho izimbungulu ezibalekela ekukhiqizeni.
Singathuthukisa ikhwalithi ngokuqinisekisa ukuthi imikhuba efanele iyalandelwa kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni komjikelezo wentuthuko. Ikhwalithi ayicatshangwanga ngemuva; kufanele kubhakwe kusuka khona ekuqaleni. Akwanele ukuthembela ekuhlolweni okuzenzakalelayo ukuthola isithombe sekhwalithi yomkhiqizo.
Ngakho-ke, yisiphi isizathu esiyinhloko esenza isivivinyo senziwe ngezifiso?
Impendulo emfushane ithi ukuphindeka . Sisebenzisa isivivinyo ngokuzenzakalela ngoba sidinga ukwenza izivivinyo ezifanayo kaninginingi. Ngabe ungafuna ukwenza isivivinyo ngokuzenzakalela ukube ubuzosisebenzisa kanye bese ukhohlwa ngakho? Vele akunjalo! Isikhathi nomzamo owusebenzisa ekwenzeni isivivinyo ngokuzenzakalela, ubungasisebenzisa ngesandla.
Manje, ngencazelo, senza izivivinyo eziphindaphindekayo, isb.zivivinyo zokubuyela emuva, esidinga ukuzenza kaningi.
Ngakho-ke, ngokuzayo, lapho ufuna ukwenza ukuhlolwa ngokuzenzakalela, thatha isinyathelo emuva bese ucabanga ukuthi kungenzeka kangakanani ukuthi wenze lolu vivinyo? Ingabe kuwufanele ngempela umzamo wokuzenzakalela isivivinyo?
susa izimpinda ohlwini Java
node js sawubona isibonelo somhlaba
I-Java Bhala Ukufaka Izibonelo Zefayela
Ungahlola kanjani ukuthi ngabe ifayili noma uhla lwemibhalo lukhona ku-Java
Kungani iSelenium neCucumber Kungafanele Isetshenziswe Ndawonye
Ungayifaka Kanjani i-JMeter Ngama-plugins Owengeziwe ku-Mac OS Usebenzisa i-HomeBrew
Ungasithumela Kanjani Isihloko Sokufakazela ubuqiniso Esiqinisekisiwe
Uyini Umsebenzi Womphathi we-QA?
Ungazisebenzisa kanjani izitatimende ze-SQL Drop, Truncate and Delete